Home News Duqayn Diiyaaradeed oo ka dhacday Gobolada Baay & Jubbada dhexe
Duqayn Diiyaaradeed oo ka dhacday Gobolada Baay & Jubbada dhexe
Wararka laga helaayo Gobolada Baay & Jubbada dhexe ee Koonfurta Somaliya ayaa sheegaya in xalay halkaasi ay ka dhaceen duqeymo ay fuliyeen diyaarado dagaal.
Deegaanka Buulo Fulaay oo ka tirsan Gobolka Baay, ayna ku sugan yihiin Al Shabaab ayaa xalay waxaa lagu dhuftay laba gantaal, waxaana xigay ciidan dagaal toos ah oo dhulka halkaasi ka fuliyay.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan Ciidankaan ay yihiin kumaandooska dowladda Federalka Somaliya oo halkaasi hawlgal gaar ah ka fuliyay.
Lama oga khasaaraha ka dhashay hawlgalkaasi Ciidamada ay ka fuliyeen deegaanka Buulo Fulaay ee Gobolka Baay.
Sidoo kale diyaarad dagaal ayaa la sheegayaa inay xalay duqeysay Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada dhexe.
Duqeyntan ayaa lala eegtay sarkaal la sheegay inuu ka tirsan yahay Al-shabaab, kaasi oo lagu magacaabayey Macalin Ibraahim Abuu Xamsa, ahaana madaxii isku xirka Al-qaacida iyo Al-shabaab.
Illaa hadda ma jirto cid si toos ah faah faahin rasmi ah uga bixisay khasaaraha kala duwan ee ka dhashay duqeymahaasi xalay ka dhacay Baay & Gobolka Jubbada Dhexe.